फुटसलले नेपाललाई अन्तरर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउनुपर्छ - मन्त्री केसी - मूल्याङ्कन अनलाइन
फुटसलले नेपाललाई अन्तरर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउनुपर्छ – मन्त्री केसी
भदौ २८, काठमाडौँ । युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजेन्द्रकुमार केसीले फुटसल खेलले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा चिनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मन्त्री केसीले नेपालको प्रजातन्त्र प्राप्ति र मुलुकको विकासको आन्दोलनमा स्व. गणेशमान सिंहको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै उनको स्मृतिमा उक्त प्रतियोगिता राखेर राम्रो काम गरेको बताए । उनले खेल क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे ।
आजदेखि शुरु भएको उक्त प्रतियोगिता यही भदौ ३१ गतेसम्म चल्ने नेपाल तरुण दल, काठमाडौँ महानगरपालिका–२६ का अध्यक्ष कृष्णबहादुर तामाङले जानकारी दिए । उनले युवालाई खेलप्रति आकर्षण गर्ने उद्देश्यका साथ फुटसल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको बताए ।
खेलको प्रथम विजेतालाई रु. १ लाख नगदसहित प्रमाणपत्र, द्वितीयलाई रु. ५० हजारसहित प्रमाणपत्र, राम्रो खेलाडीलाई जुत्ता र राम्रो गोलरक्षकलाई पञ्जा पुरस्कार दिने तरुण दल वडा नं. २६ ले जनाएको छ । उक्त प्रतियोगितामा काठमाडौँ उपत्यकाका १२ समूहको सहभागिता रहेको छ ।
« नैकाप गोल्ड कपमा दिपशिखाको फराकिलो जित (Previous News)
(Next News) सभापतिले अन्तरघात गरेको भन्दै कारबाहीको माग »